Kudzidzisa sei vana vako kuti kushinga chii | Bezzia
Maria Jose Roldan | 15/05/2021 10:52 | Dzidzisai vana
Nehurombo, kurwadziwa nekutambura chikamu chehupenyu uye zvakakosha kuti uzive nzira yekutarisana nenguva dzakadai. Muchiitiko chevana, mamiriro acho anogona kuve akaomesesa. Rufu rwemumwe munhu wepedyo kana shanduko yakapusa yeimba inogona kukanganisa hutano hwepamoyo hwemwana.
Ndokusaka vabereki vachifanira kudzidzisa vana vavo kuti vazive chinonzi kugadzikana uye nenzira iyi kuti vakwanise kukunda nguva dzakaomarara dzavanogona kuve nadzo muhupenyu hwavo hwese.
1 Chii chinonzi kugadzikana?
2 Mirayiridzo Yevabereki Ekutevera Kudzidzisa Vana Vavo Kukwana
Chii chinonzi kugadzikana?
Kutsiga hakuna chimwe chinhu kunze kwesimba iro munhu anaro, kugona kusimba mukutarisana nemamiriro ezvinhu anoonekwa seakaoma uye akaomarara. Kugona uku kunofanirwa kudzidziswa kubva pazera diki. Dzidzo nevabereki yakakosha kuitira kuti vana vadzidze kuve vakashinga kubva kumakore ekutanga ehupenyu. Ipapo isu tichaenda kukuudza iwe kuti vabereki vanofanirwa kushanda sei pakutsiga nevana vavo.
Mirayiridzo Yevabereki Ekutevera Kudzidzisa Vana Vavo Kukwana
Chekutanga pane zvese, vana vanofanirwa kunzwa vane chivimbo zvakakwana kuti vakwanise kusangana nemamwe matambudziko. Vadiki vanofanirwa kuziva kuti chiito chega chega chine mhedzisiro yacho uye kuti izvi zviitike vanofanirwa kuzvisarudzira vega. Vana vanofanira kuedza uye zvakajairika kuti dzimwe nguva vanenge vakarurama uye dzimwe nguva vanenge vachikanganisa. Chinhu chikuru ndechekuti ivo vanonzwa kutsigirwa panguva dzese dzevabereki uye nekudaro vanosimbisa kuvimba kwavo.
Kuvabatsira kuvaka kwavo kuzviremekedza kwakakosha mukudzidza kuti kushinga chii. Kunzwa uchibatsira pamwe nekugona, Ichokwadi kuti inobatsira mwana kutarisana nematambudziko akasiyana angamuka muhupenyu hwake hwese.
Chimwe chinhu icho vabereki vanofanirwa kushanda nevana vavo inyaya yekushushikana. Vana vanofanira kuziva kuti pane nguva apo zvinhu zvisingawanikwe pekutanga uye kuti zvakajairika kukanganisa. Asi nekuda kweichi chikonzero, haufanire kuvhiringidzika, iwe unofanirwa kushingirira kuti uwane izvo zvaunoda.
Pakupedzisira, zvakakosha kuti vana vazive kuti kushinga chii kubva vachiri vadiki. Vabereki vanofanirwa kudzidzisa vana vavo kuti panogara paine mhinduro yezvose uye kuti zvakakosha kuwana iyo nzira iyo inobvumidza iwe kuti uve mune yakanyanya kunaka nzira. Izvo zvinofanirwa kuve pachena kuti vana vachatambura panguva dzakasiyana muhupenyu hwavo uye kutsiga kwakakosha pakuvabatsira kukunda dzakadai dzakaoma uye dzakaoma nguva.
Zvakajairika kuti vabereki vave nenguva yakaipa chaizvo pavanoona kuti vana vavo vane nguva yakaipa uye vanotambura, asi chinhu chakajairika chinofanira kuitika uye nekudaro chinofanira kugamuchirwa. Kutenda kune zvishandiso senge kusimba, vana netariro vanozokwanisa kukunda matambudziko aya uye kumeso manzwiro uye manzwiro akadai sekurwadziwa kana kusuruvara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Dzidzisai vana » Maitiro ekudzidzisa vana vako kuti kushinga chii
Chipikiri chakuvhe: Vabate ivo nekukurumidza sezvazvinogona!